Ahoana ny fomba handehanana any Bermudes amin'ny fiara, Scooter, Bus, Taxi ary bebe kokoa
Ahoana ny fandehanana manerana an'i Bermudes
Ahoana ny fandehanana manodidina ny nosy Bermuda amin'ny cab, scooter, bus and sambo
Bermuda dia nosy kely iray, saingy, mba tsy handrenesana an-tsoratra an'i Steven Wright, tsy te-handeha azy aho. Ary hadinoy ny fanofana fiara: tsy ara-dalàna ho an'ny tsy mponin'ny mponina mitondra fiara eto. Ahoana àry no ahitanao ny nosy rehefa tonga ianao? Misy taxi-taxi, mazava ho azy, ary afaka manofa scooter ianao, toy ny nataon'ireo ray aman-dreninao tamin'ny volan-tanteliny. Bermuda koa dia manana tambajotra fitateram-bahoaka mahazatra, ary sambo fiara sy rano fisotro azo antoka izay afaka mitondra anao eo anelanelan'ireo tanànan'i Hamilton sy St. George sy ireo sehatra maro mahaliana ao amin'ilay nosy.
© Ben Fredericson avy amin'ny Flikr
Feno taxi any Bermuda, ary ny mpandeha dia mpahay matematika sy mazoto. Saingy tsy mendrika izy ireo: Ianao dia handoa $ 6.40- $ 8 ho an'ny kilaometatra voalohany arakaraka ny isan'ny olona ao amin'ny antoko, plus $ 2.25- $ 2.80 ho an'ny kilaometatra fanampiny ary $ 1 isaky ny kitapo entana entona. Toa mora hita any amin'ny seranam-piaramanidina ny seranam-piaramanidina, seranan-tsambo, trano fandraisam-bahiny, ary faritra be mpizaha tany. Ny mpandeha koa dia azo raisina ho mpitari-dalana eto an-toerana amin'ny fotoam-potoana. Ny tranonkalan'ny Fikambanana Taxi-brousse Bermuda dia mamoaka lisitra takiana amin'ny takila amin'izao fotoana izao sy ny fampahafantarana amin'ny orinasa taxi.
Bermuda Mopeds sy Scooters
© -Mike- via Flikr
Mpivady mipetraka eo an-tampony ny mopeds dia sary mahatalanjona avy amin'ny voninahitry ny voninahitr'i Bermudes tamin'ny taona 1960, ary mbola afaka manofa moped na scooter ianao mba hijerena ny làlana sy ny tora-pasika. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Open book 01.svg Anarana Bermuda Kaominina frantsay, ao amin'ny departementan'i l'Aude. Tsy mahagaga àry raha ny lozam-pifamoivoizana no mampiavaka indrindra ny mpitsidika.
Ny moped na ny scooter izay azonao dia ho matanjaka (maotera 55cc maximetatra) mba hampiakaranao ny havoana ao amin'ny nosy fa tsy dia betsaka loatra ny ho vitanao. Lafo be ny gazy. Rehefa avy nilaza izany rehetra izany ianao, ny fanofana scooter na moped dia manome anao ny hamaroan'ny fahalalahana hijery an'i Bermudes.
Scooter sy moped orinasa mpanofa:
Smatts Cycle Livery
Bermuda bisy ao amin'ny tranombarotra Hamilton. © Andrew Currie amin'ny alàlan'ny Flikr
Bermuda dia tohanan'ny tambazotran'ny bus manerantany sy azo antoka, mamela ny mpitsidika hiala lavitra iray amin'ny nosy iray amin'ny iray hafa amin'ny fampionona amin'ny rivotra. Ny fialantsasatra dia miorina amin'ny rafitra iray - ny halehibiazanao lavitra, arakarao kokoa ny karamanao. Ny fijanonan'ny bus dia voamarika amin'ny boaty hosodoko: ny bala mena dia ho an'ny fiarandalamby mivoaka avy ao Hamilton, raha ny bala mena kosa dia amin'ny fiara fitaterana mankany Hamilton.
Ny lozam-piaramanidina bus dia manomboka amin'ny $ 3 ka hatramin'ny $ 4.50 isaky ny dia, saingy raha mampiasa ny bus ianao dia mety hahatsapa kokoa ny andro iray: mandany 12 dolara isan'andro izy ireo ho an'ny olon-dehibe, $ 6 isan'andro ho an'ny ankizy, miaraka amin'ny fihenam-bidy ho an'ny maro andro. Azonao atao koa ny mividiana tapakilam-bokim-bidy miaraka amin'ny fihenam-bidy ao amin'ny seranan-tsambo bisy ao Hamilton sy any amin'ny biraon'ny paositra. Raha mandoa vola ianao dia mila fiovana marina, amin'ny vola madinika.
Ny fiara fitaterana dia mihazakazaka hatramin'ny 7 ora ka hatramin'ny 11 hariva. Afaka mahita sarintany fitaterana bus amin'ny aterineto any amin'ny Ministera misahana ny fitaterana any Bermudes ianao.
Fidirana haingam-pandeha bermuda. © Kansas Photo avy amin'ny Flikr
Ho an'ny fifanakalozan-kevitra haingana sy mahazatra dia mandiniha sambo mankany Bermudes. Ny saran-dalan'ny Sea Express ao amin'ny nosy dia miasa amin'ny lalana efatra:
Pink: Hamilton-Paget-Warwick (miaraka amin'ny fijanonana ao Belmont Ferry, Darrell's Wharf, Salle Kettle, Hodson's Ferry, ary Ferry ambany)
Blue: Hamilton-West End-Dockyard (miaraka amin'ny fijanonana ao amin'ny Bay Cavello, Watford Bridge, ary Dockyard Wharf)
Orange: Hamilton-Dockyard-St. George (fahavaratra irery ihany)
Araka ny hitanao, ny fiaramanidina rehetra dia avy any Hamilton, any amin'ny seranan-tsambo ao Front Street. Tombontsoa ho an'ny olon-dehibe dia $ 4-5 arakaraka ny lalana. miaraka amin'ny saram-pihariana fanampiny ho an'ny bisikileta sy fihenam-bidy ho an'ny ankizy. Misy ny fandehan-javatra isan'andro izay tsara amin'ny sambo sy bisy. Ny fiaramanidina dia mihazakazaka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny hariva hariva.
Sary avy amin'i VegasJon / CC nataon'i SA 4.0
Bermuda dia mety ho be loatra ny mandeha, fa afaka manao dia bisikileta avy any amin'ny tendrony iray amin'ny iray hafa, ary ny "lalan-dalan'ny lalamby" izay manaraka ny làlan'ny lamasinina Bermuda izay mamakivaky ny ankamaroan'ny nosy dia manao fiara fitaterana bisikileta manokana mahafinaritra.
Famonoana sy fiarovana any Bermudes
Moa ve Bermuda sy Bahamas any Karaiba?
Ny tari-dalana manan-danja ho an'ny Horseshoe Bay Beach ao Bermudes
8 Zavatra atao any Bermuda (Ankoatra ny Beach)
Sakafo sy fomban-drazana goavana ao Popeyes
Malaria, Dengue & Viral Fever: Ahoana no hilazana ny fahasamihafana?
Ny Trano Fotsy: Ny Torolàlana ho an'ny Mpizaha tany, Tours, Tickets & More
Arizona Stocking Stuffers: Fanomezana fohy noho ny $ 10
Los Angeles Tours Explore LA avy amin'ny Tany, Ranomasina na Air
Sarin-tany akaikin'i Amsterdam
Ahoana no handehananao any Rosia - Ahoana no hahatongavako any Rosia?
Ny momba ny valan-tserasera Xetulul any Guatemala
Inona no atao hoe Treasure Trove? Ary Ahoana Raha Mahita Harena Kokoa?
Ny fomba hiverenana avy any Hamburg ho any Paris
Tsidiho ny tanàna mampalahelo indrindra any Amerika: Salem!
Tsidiho ny tranokala Anchorage sy ny Life View any amin'ny Arktis